5 manomano ekuwedzera kuchengetedza mukicheni diki | Bezzia
Maria vazquez | 08/06/2021 12:00 | Cooking
Makicheni madiki akaoma. Nzira yekugadzira nzvimbo yezvose zvatinoda munzvimbo diki diki? Kuwedzeredza kuchengetedza ndiko kiyi yekuita kuti kicheni shande uye kubika richiri basa ratinofarira. Asi kuzviita sei?
MuBezzia takaunganidza nhevedzano yemanomano ku wedzera kuchengetedza mukicheni kadiki. Uye haudi kicheni isina chinhu kuti ugone kuzviita; nehunyanzvi iwe unogona zvakare kuzviisa ivo mukicheni yatove nemidziyo. Cherekedza!
Usati watanga kushandisa hunyengeri hwatinogovana newe, tinoda kuti uve pachena kuti kana uine zvinhu zvakawanda kupfuura nzvimbo yekuchengetera, haufe wakazowana kicheni yako yakashambidzika. Tungamira, bvisa zvausingashandise nguva dzose uye zvese zvichave nyore.
1 Tora mukana wemadziro ese
2 Deredza kukura kwemidziyo
3 Bheji pamatafura anobviswa
4 Sarudza saiti yechinhu chimwe nechimwe
5 Isa masuo anotsvedza
Tora mukana wemadziro ese
Une rusvingo rwemahara mukicheni mako here? Isa pasi-kune-siringi mhinduro izvo zvinokutendera iwe kuti uwedzere nzvimbo yekuchengetera. Sanganisa mhinduro dzakavharwa dzekuchengetedza pamwe nedzimwe dzakavhurika dzinokutendera kuti uve neizvo zvaunoshandisa mazuva ese. Mhinduro idzi hadzifanirwe kunge dzakadzika kwazvo; Masentimita makumi maviri anokwana kuronga marongo egirazi ane nyemba, zviyo, mbeu nezvinonhuwira, pamwe nekuchengetedza midziyo midiki, ndiro kana makapu.
Iwe unogona zvakare kutora mukana weiyo yekicheni kumberi kuti uve nenzvimbo yekuwedzera kuronga akasiyana macondiment nemidziyo. A simbi yesimbi kana shefu rakamanikana rinokupa nzvimbo pakati pebasa rekumusoro uye makabati ekumusoro kune zvimwe zvinhu kupfuura zvaunofunga.
Deredza kukura kwemidziyo
Midziyo inotora chikamu chikuru chenzvimbo mukicheni medu. Zvisinei, izvi hazvifanirwe kunge zvakaita seizvi; tinogona kugadzirisa hukuru hwemidziyo yedu kune kukura kwekicheni yedu. Kuisa pekutanga ndiyo kiyi kusarudza midziyo yemagetsi yatingaite tisina kana yatinogona kudzikisa muhukuru.
Dishwasher yakakosha kwauri here? Zvichida iwe unogona kudzikisa saizi yayo mukutsinhana nekuipfeka zvakanyanya nguva zhinji. Zvakare, kana iwe ukasanyanyisa, iwe ungangodaro haudi iyo ina-inopisa burntop. Iwe unogona kutofunga kufunga kuita pasina hovhoni kana microwave uye kusarudza ovhoni yewowave, a mudziyo une hunyambiri basa. Idzi pamwe nedzimwe shanduko senge kudzikisa saizi yefiriji kunokutendera kuti unakirwe nenzvimbo yakawanda yekuchengetera zvinhu.
Bheji pamatafura anobviswa
Tafura yekuburitsa kunze inotibatsira sei kuwedzera kuchengetedzwa mukicheni? Kazhinji patinopa mukicheni tinozviita nekuchengetedza imwe yemadziro kuisa tafura. Tafura iri mumakicheni madiki inowanzo kupetwa. Zvisinei, nhasi hatifaniri kudaro kusiya madziro emakabati kuisa tafura.
Dhonza-kunze matafura ndeimwe nzira yekupeta matafura mumakicheni madiki. Ivo vanobatanidzwa mumakicheni makabati sekunge chidimbu cheTetris. Nenzira iyi, nzvimbo yekuchengetera inoda kupihwa ishoma.
Sarudza saiti yechinhu chimwe nechimwe
Imwe nzira yekuwedzera nzvimbo yekuchengetera kupa nzvimbo yechinhu chimwe nechimwe. Neiyi nzira chete iwe unogona gadziridza imwe neimwe yemakabati kana madhirowa ekugarisa zvinhu zvakawanda sezvinobvira. Iwe unogona kuzadzisa izvi nekushandisa bvisika mhinduro, vaparadzanisi ...
Edza mushe kabhodhi rega rega, izvo zvaunoda kuchengeta mairi uye tsvaga mhinduro dzakakodzera kuti uzvigadzirise. Nhasi kune akawanda zvitoro zvakakumikidzwa kusangano repamba mauri muchawana zvese zvaunoda. Zvakawanda zvekuti uchafanirwa kudzivirira kupenga kuitira kuti usazowedzera mari.
Isa masuo anotsvedza
Sliding masuo anogadzirisa akawanda matambudziko munzvimbo diki. Kwete chete ivo vanofambisa kufamba mune izvi, asi ivo vanokutendera iwe kuti uise makabati uko aine zvakajairika madhoo izvo zvingave zvisingaite kuzviita. Tarisa mapantri ari mumufananidzo uri pamusoro! Iwe unozoda 25 masentimita kudzika kuti ugadzire akaenzana neakareruka uye asingadhuri modular masisitimu uye anotsvedza masuo.
Iwe unofarira aya marudzi emifungo yekuvandudza mashandiro ekicheni? Zvinoshanda kwauri here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Cooking » 5 manomano ekuwedzera kuchengetedza mukicheni diki
Nzira yekugadzira maziso egirini